खेल संसार – Page5– Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२ आश्विन २०७७, शुक्रबार १६:०४ English
साफ च्याम्पियनसिप एक वर्ष धकेलियो १५ असार २०७७, सोमबार २३:२८
प्रिमियर लिगको उपाधि ३० वर्षपछि लिभरपुललाई १२ असार २०७७, शुक्रबार ०९:४२
एजेन्सी, १२ असार । लिभरपुलले ३० वर्षपछि प्रिमियर लिगको उपाधिमा जितेको छ । बिहीबार लिग अन्तर्गत भएको खेलमा म्यानचेस्टर सिटी चेल्सीसँग २–१ गोल अन्तरले पराजित भएपछि लिभरपुलले ३० वर्षपछि उपाधि हात पारेको हो । लिभरपुलका लागि उपाधिमा कब्जा जमाउन एक जित वा म्यानचेस्टर सिटीको एक हार..
बार्सिलोना ला लिगाको शीर्ष स्थानमा उक्लियो १० असार २०७७, बुधबार ०९:१६
एजेन्सी, १० असार । स्पेनिस ला लिगामा बार्सिलोना विजयी भएको छ । गएराती भएको खेलमा बार्सिलोनाले एथलेटिक बिल्बाओलाई १–० गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । बार्सिलोनाको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा बार्सिलोनाको जितमा इभान राकिटिकले गोल गरेका थिए । सब्स्टिच्युट खेलाडीको रुपमा खेलको ६४ औँ..
रियल म्याड्रिड ला लिगाको शिर्ष स्थानमा उक्लियो ८ असार २०७७, सोमबार ०९:३३
एजेन्सी, ८ असार । रियल म्याड्रिड ला लिगाको शिर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । गएराती भएको खेलमा रियल सोसीयडाडलाई २–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै रियल म्याड्रिड शिर्ष स्थानमा उक्लिएको हो । रियल म्याड्रिडको जितमा करिम बेन्जमा र सर्जियो रामोसले एक एक गोल गरे । त्यस्तै सोसीयडाडका लागी मिकेल..
ला लिगाः बार्सिलोना सेभियासँग बराबरीमा रोकियो ६ असार २०७७, शनिबार १५:०६
एजेन्सी, ६ असार । स्पेनिस ला लिगाको शीर्ष स्थानमा रहेको बार्सिलोना बराबरीमा रोकिएको छ । गएरातीको खेलमा बार्सिलोना सेभियासँग गोल रहित बराबरीमा रोकिएको हो । मेस्सीले खेलको पहिलो हाफमा प्रहार गरेको फ्रीकिक बारमा लागेर बाहिरिएको थियो । अन्तिम समयमा लुइस स्वारेजले गरेको प्रहार समेत..
मेस्सी र फातीको गोलमा बार्सिलोना विजयी ३ असार २०७७, बुधबार १०:३८
एजेन्सी, ३ असार । स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत बार्सिलोनाले अर्को जित हासिल गरेको छ । गएराती सम्पन्न खेलमा लेगानेसविरुद्द २–० गोल अन्तरको जित हासिल गर्दै बार्सिलोनाले शीर्ष स्थानमा अंक दूरी फराकिलो बनाएको छ । बार्सिलोनाको जितमा अन्सु फाती र कप्तान लियोनेल मेस्सीले एक एक गोल गरे ।..
बुण्डेस लिगाको उपाधि लगातार ८ औँ पटक बायर्नलाई ३ असार २०७७, बुधबार ०९:४१
एजेन्सी, ३ असार । गएराती वेरडेर ब्रेमेनलाई १’० गोल अन्तरले पारजित गर्दै बायर्न म्युनिखले लगातार आठौ पटक बुण्डेस लिगाको उपाधि जितेको छ । बायर्नको जितमा रोबेर्ट लेवानडोस्कीले गोल गरेका थिए । लेवानडोस्कीले यस सिजनमा ३१औ गोल गर्दै बायर्नलाई उपाधि दिलाएका हुन् । खेलको ७९औ मिनेटमा..
म्याच फिक्सिङको अभियोग लागेका पूर्वकप्तान थापासहित छ खेलाडीलाई सफाइ २ असार २०७७, मंगलवार २०:१८
काठमाडौँ, २ असार । सर्वोच्च अदालतले म्याच फिक्सिङको अभियोग लागेका राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्वकप्तान सागर थापासहित छ खेलाडीलाई सफाइ दिएको छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसला सदर गर्दै खेलाडीलाई सफाइ दिएको हो । सफाइ..
ला लिगामा बार्सिलोना र मेस्सीको नयाँ किर्तिमान ३२ जेष्ठ २०७७, आईतवार १२:४०
एजेन्सी, ३२ जेठ । कोरोना महामारीका बीच पुनः सुचारु भएको ला लिगामा बार्सिलोनाले विजयी शुरुवात गरेको छ । गएराती सम्पन्न खेलमा बार्सिलोनाले मल्लोर्कालाई ४–० गोल अन्तरको पारजित गरेको हो । बार्सिलोनाको जितमा अर्टूरो भिडाल, मार्टिन ब्रेथवेट, जोर्डी अल्बा र लियोनेल मेसीले एक एक गोल गरे ।..
नेपाल, नामिबिया र स्कटल्याण्ड बीचको त्रिकोणात्मक सिरिज स्थगित २९ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १६:३३
काठमाडौँ, २९ जेठ । आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग २ अन्तर्गत स्कटल्याण्डमा हुने तय भएको त्रिकोणात्मक सिरिज स्थगित भएको छ । कोरोना भाइरसको कारण स्कटल्याण्ड क्रिकेट बोर्डले सिरिज स्थगित गरिएको जानकारी दिएको छ । स्कटल्याण्ड क्रिकेटको आग्रहपछि आईसीसीले नवौँ चरणका खेलहरु स्थगित गरेको..
आफ्ना जनतालाई अर्जेन्टिनी राष्ट्रपतिको आग्रह, ‘मेस्सीको खेल हेरेर खुशी हुनुस्’ २६ जेष्ठ २०७७, सोमबार ११:०४
एजेन्सी, २६ जेठ । अर्जेन्टिनी राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नाडिजले आफ्ना नागरिकलाई बार्सिलोनाको खेल हेर्न आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नाडिजले आफ्ना देशकशा नागरिकलाई अर्को साता शुरु हुने ला लिगामा बार्सिलोना खेल हेरेर खुशी हुन आग्रह गरेका हुन् । कोरोना भाइरस महामारीपछि..
२० वर्ष मुनिका विश्वका उत्कृष्ट क्रिकेटरमा सन्दीप र कुशल पनि १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार १३:५०
काठमाडौँ, १२ जेठ । २० वर्ष मुनिका विश्वका उत्कृष्ट क्रिकेटरको सूचीमा नेपालका २ जना परेका छन् । अधिकांसका खेलाडी टेस्ट राष्ट्रका पर्दा एसोसिएट राष्ट्रका चार खेलाडी परेका हुन् । एसोसिएट देश युएई र स्टकल्यान्डका १–१ जना सूचीमा पर्दा नेपालबाट २ जना परेका हुन् । युएईको मिडिया द नेसनलले..
ललितपुर फुटबल संघका अध्यक्षको निलम्बनप्रति एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्षको आपत्ति ७ जेष्ठ २०७७, बुधबार २०:५४
काठमाडौँ, ७ जेठ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले ललितपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापालाई निलम्बन गरेकोप्रति एन्फाकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङले आपत्ति जनाएका छन् । नेम्बाङले एन्फाले विधिसम्मत निर्णय नगरेको टिप्पणी गरेका छन् । कार्यसमिति बैठक नबसी..
जिल्ला फुटबल संघ ललितपुरका अध्यक्ष थापा निलम्बित ६ जेष्ठ २०७७, मंगलवार २०:२९
काठमाडौँ, ६ जेठ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले जिल्ला फुटबल संघ ललितपुरका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापालाई निलम्बन गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा एन्फा र यसका पदाधिकारीविरुद्ध अपशब्द प्रयोग भन्दै उनलाई एन्फाले साधारणसभा सम्मका लागि निलम्बन गरेको हो । गत वैशाख २२ गते एन्फा दिवसका अवसरमा..
कोरोनाका कारण नेपालका पूर्व फुटबलर पन्थीको मृत्यु १७ बैशाख २०७७, बुधबार १६:१७
काठमाडौँ, १७ बैशाख । अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण मङ्गलबार एक नेपालीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यमा बस्दै आएका महेश पन्थी रहेका छन् । गत चैत २६ (अप्रिल ८) गते उनी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । उनीसमेत गरी अमेरिकामा मृत्यु हुने नेपालीको सङ्ख्या १५ पुगेको छ..
इंग्लिस प्रिमियर लिग जुन पहिले हप्ताबाट १६ बैशाख २०७७, मंगलवार ११:३१
एजेन्सी, १६ बैशाख । इंग्लिस प्रिमियर लिगको सिजन २०१९–२० जुन पहिलो सातादेखि सुरु गर्ने विषयमा छलफल हुने भएको छ । कोरोना भाइरसका कारण मार्चदेखि स्थगित भएको लिग जुन ८ देखि सुरू गर्ने र जुलाईको अन्त्यमा सक्ने विषयमा शुक्रबार छलफल हुन लागेको हो । ब्रिटेनका खेलकुद मन्त्री ओलिभर डोडेनले..